Tsy nisy tafita velona tamin'ny fianjeran'ny fiaramanidina An-12 tany Siberia any Rosia
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Rosia » Tsy nisy tafita velona tamin'ny fianjeran'ny fiaramanidina An-12 tany Siberia any Rosia
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Belarus • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao • People • Vaovao Mafana Rosia • Safety • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Tsy nisy tafita velona tamin'ny fianjeran'ny fiaramanidina An-12 tany Siberia any Rosia.
Nohamafisin’ny governoran’ny Faritr’i Irkutsk fa maty avokoa ireo tao anaty sambo, ary tsy nisy tafita velona tamin’ireo rava.
Fiaramanidina turboprop tamin'ny vanim-potoana Sovietika An-12 Belarosiana nianjera sy may tany Siberia, Rosia.
Ny An-12 dia fiaramanidina turboprop tamin'ny vanim-potoana sovietika novokarina teo anelanelan'ny 1957 sy 1973, indrindra ho an'ny tafika mitam-piadiana ao amin'ny USSR.
Ity tranga ity dia nanamarika ny farany tamin'ireo lozam-pifamoivoizana an'habakabaka tany Siberia sy ny Farany Atsinanan'i Rosia.
Araka ny filazan'ny manampahefana Rosiana ao Moskoa dia olona fito farafahakeliny no tao anatiny Antonov An-12 fiaramanidina entana nianjera tao Siberia, akaikin'ny tanànan'i Irkutsk.
Toa an'ny zotram-piaramanidina Belarosiana 'Grodno' ilay fiaramanidina ary nanao sidina entana Siberia, Rosia.
“Tamin'ny 2:50 tolakandro tamin'ny ora Moskoa, ny An-12 fiaramanidina, nanidina teo anelanelan'i Yakutsk sy Irkutsk, nanjavona tao amin'ny radara," hoy ny tompon'andraikitra Rosiana.
"Tamin'ny voalohany, olona roa no maty ary mbola tsy fantatra ny hiafaran'ny olona dimy hafa."
Araka ny tatitra savaranonando, hita tany amin'ny faritry ny tanànan'i Pivovarikha (ao amin'ny faritr'i Irkutsk) ny toerana nianjera, tsy lavitra ny seranam-piaramanidina. Niditra tao anaty faribolana faharoa ilay fiaramanidina nandritra ny fipetrahana ary avy eo nanjavona tao amin'ny radara.
Araka ny filazan'ny minisiteran'ny vonjy taitra Rosiana, rehefa tonga teny an-toerana ny sampana mpamono afo sy mpamonjy voina, dia nirehitra ilay fiaramanidina, saingy nahavita namono ny afo ny sampana mpamonjy voina.
Olona 100 mahery sy fiara 50 no voalaza fa tonga eny an-toerana ary manampy amin’ny fanarenana.
The An-12 dia fiaramanidina turboprop tamin'ny vanim-potoana Sovietika novokarina teo anelanelan'ny 1957 sy 1973, indrindra ho an'ny tafika mitam-piadiana ao amin'ny USSR. Efa niasa tamin'ny zotram-piaramanidina sivily maromaro tany amin'ny Firaisana Sovietika teo aloha izy io, indrindra ho an'ny sidina entana.
Tamin'ny taona 2019, taona An-12 nianjera teo akaikin'ny seranam-piaramanidina Lviv any Andrefan'i Okraina, nahafatesana dimy ary nandratra olona telo hafa.
Ity tranga ity dia nanamarika ny farany tamin'ny andiana lozam-pifamoivoizana an'habakabaka tany Siberia ary ny Far East Rosiana. Tamin'ny volana Jolay, ireo mpiasan'ny vonjy taitra nanadihady ny fanjavonan'ny fiaramanidina turboprop Antonov An-26 dia nanambara fa nalain'izy ireo ny fatin'ny mpandeha 22 sy ny ekipa enina taorian'ny nianjerany tany amin'ny hantsana tao amin'ny saikinosy Kamchatka.